China Diesel Engine Long Shaft Vertical Turbine Fire Pump orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Tongke
♦ Ny paompy, ny mpamily ary ny mpanara-maso dia napetraka amin'ny fototra iraisana.
♦ Vondron-baseplate mahazatra dia manafoana ny filàn'ny velaran-tany misaraka.
♦ Ny singa iraisana dia mampihena ny filan'ny fifandraisana sy ny fifandraisana.
♦ Tonga ao anaty fandefasana natambatra ny fitaovana, mamela ny fametrahana sy fikirakirana haingana sy tsotra kokoa.
♦ Rafitra natokana ho an'ny namboarina, ao anatin'izany ny kojakoja, fittings, ary ny layout izay mifanaraka amin'ny famaritan'ny mpanjifa.
♦ Mba hahazoana antoka ny famolavolana
Paompy afo an'ny turbine mitsangana TKFLO Advantages:
♦ Miaraka amin'ny famolavolana sy ny rafitra mandroso hydraulic, mandray ny fizotran'ny Ashland mba hahatonga ny lelan'ny impeller, ny fizotran'ny epoxy coating amin'ny impane vane, ary ny fisafidianana fitaovana mety, mamela ny paompy hanana fahombiazana tsara sy fiainana lava.
♦ Fitaovana famaohana whirl sy firafitra toy ny maze mahatonga ny fasika tsy hiditra ao anaty bearings.
♦ Ny motera diesel dia vokatra an-trano avo lenta na hafarana avo lenta avokoa, izay manana ny fiasa tsara amin'ny fanombohana, ny fahaiza-manao matanjaka be loatra, ny firafitra tery, mety amin'ny fikojakojana, tsotra ampiasaina, ary mandeha ho azy.
Fahaiza-manao fanamboarana trano feno
Ny fahaizan'ny fitsapana mihodina amin'ny mekanika miaraka amin'ny fitaovana nomen'ny mpanjifa ho an'ny fenitra NFPA rehetra
Modely marindrano ho an'ny herinaratra hatramin'ny 2.500 gpm
Modely mitsangana ho an'ny capacité ka hatramin'ny 5,000 gpm
Modely an-tsipika ho an'ny capacities ka hatramin'ny 1,500 gpm
Farano ny modely suction ho an'ny capacities ka hatramin'ny 1,500 gpm
Drives: motera elektrika na motera diesel
Fitaovana fototra sy rafitra fonosana.
Ny paompy elektrika Electric Drive sy ny Diesel Engine Drive dia azo omena amin'ny alàlan'ny paompy, kapila, fanaraha-maso ary kojakoja ho an'ny lisitry ny serivisy afo sy ekena ary TSY NIDY. Ireo singa sy rafitra fonosana dia mampihena ny vidin'ny fametrahana paompy afo ary manolora ireo
Mba hamenoana ny tolo-kevitry ny fenitry ny National Fire Protection Association izay navoaka tao amin'ny Pamphlet 20, fanontana ankehitriny, dia misy kojakoja ilaina amin'ny fametrahana paompy rehetra. Samy hafa anefa izy ireo, mba hifanaraka amin'ny filan'ny tsirairay mametraka sy ny takian'ny tompon'andraikitra fiantohana eo an-toerana. Tongke Pump dia manome fittings paompy isan-karazany izay misy: mpampitombo ny tsiranoka concentric, valizy fanalefahana casce, reducer suction eccentric, fampitomboana ny tsiranoka, cone overflow, lohan'ny valizy, valves fantsona, kapoaka sy rojo valizy, fantsom-pifandraisana sy fivoahana, valizy fanamaivanana, valizy famotsorana rivotra mandeha ho azy, metatra mikoriana ary valizy mitete baolina. Na inona na inona takiana, Sterling dia manana tsipika fampitaovana feno ary afaka manome fahafaham-po ny fepetra takiana amin'ny fametrahana tsirairay.
Ireo tabilao namboarina etsy ambany dia maneho sary amin'ny sary ny kojakoja maro ary koa ny kapila azo aidina izay azo alaina miaraka amin'ny paompy afo sy ny rafitra Tongke rehetra.
Previous: API610 ANSI Process Chemical Standard Petrochemical Heavy Crude Fuel Pump Pump
Manaraka: LDP Series Single-Stage End-Suction Horizontal Centrifugal Pump Pure Water
fahafahana 20-1400 m3/ h
Fanerena miasa hatramin'ny 2.0Mpa
savaivony DN 25-400 mm
ranon-javatra rano madio na ranon-javatra ara-batana sy simika Rano tsy miandany, PH = 6.5-8.5, atin'ny gazy klôro = 400mg / l, hafanana antonony latsaka ny 40 ℃
Hafainganana paompy 1000-3600 RPM
maotera Cummins, Deutz, Perkin na marika China hafa
Bowl: vy vy, vy vy
Shaft: Vy vy
Impeller: vy vy, alimo na vy vy
Loha famoahana: Manary vy na vy vy
Ampiasaina indrindra amin'ny famatsian-drano amin'ny alàlan'ny petrochemical, gazy voajanahary, zavamaniry herinaratra, lamba landihazo, wharf, fiaramanidina, fanodinana entana, trano miakatra avo sy indostria hafa. Izy io koa dia azo ampiharina amin'ny sambo, tanky an-dranomasina, sambo mpamono afo ary ireo fotoana famatsiana hafa.
Single dingana farany suction centrifugal karazana NFPA ...